ကိုနိုင်း - ခေတ်ပေါ်ကဗျာများထဲမှထုတ်ယူလိုက်သောလွဲချော်မှုများ
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၁၂ )
(သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၇
ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့အရွေ့ကိုမျှော်ငေးကြည့်ဖို့ ပြတင်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ တိုက်ခတ်လာတဲ့ကဗျာရပ်ဝန်းထဲက လေတွေ ဟာ တခါတခါ ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခတ်လာပါတယ်။ ဒီလို ကြမ်း တမ်းစွာ တိုက်ခတ်လာတဲ့လေကြမ်းတွေရဲ့အထိအတွေ့က တခါ တခါ ကျနော်တို့ကိုကြက်သီးထသွား စေပါတယ်။ တခါတခါ တုန်လှုပ်သွားရပါတယ်။ တုန်လှုပ်ရုံတင်မက ကြောက်ရွံ့တဲ့ ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ၊ တချို့တိုက်ခတ်လာတဲ့လေက ညင်းညင်းညံ့ညံ့နဲ့ သိမ်မွေ့ မှုကိုခံစားစေပါတယ်။ ဒီလေကို ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ရင်ထဲကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်။ ဒီလို ခေတ်ပေါ်ကဗျာရပ်ဝန်းဟာ ခပ် ကြမ်းကြမ်း တိုက်ခတ်တာတွေရှိသလို၊ ညင်သာသိမ်မွေ့မှုတွေ လည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးသော လေတိုက်ခတ်မှုတွေ ထဲက ခေတ်ကိုလှမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ခေတ်ပေါ်ကဗျာလေထဲမှာ ထိုးဖောက်ကြည့်ရင်း လောကရဲ့ဖြစ်တည်နေမှုများကိုနားလည်ပြီး ဘဝတွေ ကြီးထွား ရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်များလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို ကဗျာဆရာသစ္စာနီက မေလထုတ် Idea မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ စီးကရက်တလိပ်ကိုမီးမညှိ ဘဲသောက်တဲ့အခါ ဆိုပြီးရေးပြပါတယ်။
ကျနော်တို့နားမလည်နိုင်ပဲရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ရတာတွေကို ပြန်စဉ်းစားလိုက်မိရင်၊ ကိုယ်မြို့ ကိုယ့် ဒေသ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ဘာသာစကား ကိုယ့်အစားအစာတွေရှိတဲ့နေရာမှာ အရာရာတိုင်းကို ကိုယ်နား လည်ပြီလို့ မတွေးထားပါနဲ့။ ကိုယ်ရပ်ဝန်းထဲမှာ ၀င်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှုရှိုက်ရတဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရပ်ဝန်းက တိုက်ခတ်လာတဲ့လေတွေကို ကြမ်း သည်ဖြစ်စေ၊ ညင်သာသည်ဖြစ်စေ၊ ရှုရှိုက်ရမှာပါ။
ဒီလိုရှုရှိုက်မိပြီးတဲ့အခါမှ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လေကိုမရှုရှိုက်မိအောင် နှာခေါင်းပိတ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ရှောင် တိမ်းသည်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုခံစားမိပြီး အီလည်လည်ဖြစ်သွားတာ မျိုး၊ ရင်ဘတ်ကိုမထိပဲကျောအောင့်သွားရတာမျိုး၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့မအပ်စပ်တဲ့ ဘဝတွေနောက် မလိုက်သင့်ဘူးဆိုတာကို အသိတရားနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
အသိတရားနဲ့လူတွေထဲမှာလည်း ကိုယ့်ဘဝ၊ ကိုယ့်အခြေအနေကိုနားမလည်တဲ့လူတွေ များနေတတ်ပါ တယ်။ ဒီလိုနားမလည်မှုတွေ များလေ အယောင်ဆောင်တတ်သူတွေ ကြီးပွားလေဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နေတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ရှိနေတဲအြကြောင်းကို ကဗျာဆရာ သန်းဆွေမိုး(ကလော)က ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်နဲ့တော့ မဆိုင်သလိုပါပဲ။ ထားပါတော့။
လက်ပစ်ကူးနေကြတာက လူတွေလေ။ ။
ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးထဲမှာ လူတွေ အလူးအလဲ ကူးခတ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ခွေးတအုပ်က လောကကြီးကို ခိုးစားနေကြတာကို အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူခိုးသူခိုးလို့အော်ဖို့ ပါးစပ်ပြင်နေတဲ့လူတွေမအော် နိုင်ခင်မှာ သူခိုးပြန်စွပ်စွဲခံလိုက်ရတယ်။လောကကြီးထဲမှာ တကယ်ခိုးနေကြတဲ့သူခိုးတွေမှန်း သိပေမယ့် တိုင်းပြည်ကိုခိုးယူပြီး တရားလိုလုပ်ပြီး တရားရုံးကိုဦးတိုက် လျှောက်ထားသူမရှိကြပါဘူး။ တရားရုံးရဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာလည်း တိုင်းပြည်ဒေါက်တိုင်တွေကို ခိုးယူနေကြတော့၊ လူအများဟာ သေရေး ထက် ရှင်ရေးအတွက် ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးခတ်နေကြ ရပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သူခိုးကြီးတွေသိခဲ့ကြပြီး လောကရဲ့အထာ၊ လူအများရဲ့အထာကို သိနေခဲ့ကြတာကြောင့်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါကို မေလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ကဗျာဆရာ တမျိုးနီက သေရေးရှင်ရေးဆိုတဲ့ကဗျာကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
လမ်းအထာကို သိခဲ့ပါပြီ။ ။
လောကကြီးက အထာသိနေမှ အထာနဲ့ခပ်တည်တည်နေနိုင်တယ်။ သူသိခဲ့တဲ့လမ်းကို ဘယ် လျှောက်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိနေတယ်။ ဖိနပ်မပါပေမယ့် လမ်းအထာကိုသိနေတဲ့လူအတွက် ဘယ်နေ ရာမှာ ချိုမ့်၊ ဘယ်နေရာမှာ ခလုပ်တိုက်တတ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဆူးညောင့် စသဖြင့် သိနေတယ်။ ဒီအထာကိုလူအများသိသွားမှာကိုတော့ ကြောက်တယ်။ မသိသူတွေများတဲ့အရပ်မှာ လူတွေရဲ့ကုတ်ကို သွေးစုတ်ပြီးရှင်သန်ခဲ့တယ်။ လူတွေရဲ့ဘ၀တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရ မလဲ၊ ဘယ်လိုရှောင်တိမ်းရမလဲဆိုတဲ့အထာကို သိတယ်။ အထာကိုမသိတဲ့သူတွေကတော့ သေဆုံးသွား တဲ့အသက်တွေကို ဘယ်လိုရှင်သန်အောင် လုပ်မလဲမစဉ်းစားခဲ့သူတွေပါပဲ။
ဒီလူတွေဟာ ရိုးသားခြင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လူတွေလား၊ ရိုးသားခြင်းကိုတည်ဆောက်ရင်း ကိုယ်ကျင့်တရားပြိုပျက်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေလား။ သေချာတာကတော့ သူတို့လက်ခံရထားတဲ့ ကံကြမ္မာ ညံ့နေ တာရယ်၊ အညံ့တွေစုဝေးနေတော့ ပိုပြီးညံ့သွားတာရယ်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မသန့်နိုင်တော့ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လိုအပ်နေတာက လူတွေရဲ့အသိတရားတွေ ငုံ့လျှိုးကွယ်ပျောက်နေတာပါပဲ။ ဒါတွေ အမြဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရေရိုင်းမြေရိုင်း အလွန် ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့် ကဗျာအင်အားစု group ထဲက ကဗျာဆရာရိုးတံ(ပုလဲမြေ)ရဲ့ ဖြစ်သွားပုံကဗျာကို ဖတ်ကြည့် ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
လူတွေဟာ အ၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေသမျှကာလပတ်လုံး အနာဂတ်လမ်းဟာ အလင်းတွေ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိတရားကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ရှာဖွေမတွေ့နိုင်သေးခင်မှာ ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးထဲမှာ လက်ပစ်ကူးနေကြ ရဦးမှာပါ။ လူလိမ္မာဆိုသူတွေရဲ့ အထာနပ်မှုထဲမှာ လှည့်ဖျားခံနေရဦးမှာပါ။ ခုနှစ်စင်ကြယ်ရဲ့လမ်းပြမှုဟာလည်း မကြည့်တတ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် ရွေ့လျားပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။
နောက်ဆုံး ရုန်းကန်ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝနဲ့လွဲချော်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေသာ ရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဘဝတွေမဆုံးရှုံးစေချင်လို့ရှိရင် အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်ထဲကနေ တိုးထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါ။ ဝိဇ္ဇာအသိ တရားများလာဖို့အတွက် စာများများဖတ်စေချင်ပါတယ်။
၁။ သစ္စာနီ(စီးကရက်တလိပ်ကိုမီးမညှိဘဲသောက်တဲ့အခါ)၊ Idea မဂ္ဂဇင်း၊မေလ ၂၀၁၇။
၂။ သန်းဆွေမိုး(ကလော)၊( ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး)၊ Than Swe Moe ဖေ့ဘုတ်၊ မေလ ၂၀၁၇။
၃။ တမျိုးနီ( သေရေးရှင်ရေး)၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ ၂၀၁၇။
၄။ ရိုးတံ(ပုလဲမြေ)၊( ဖြစ်သွားပုံ)၊ ရေရိုင်းမြေရိုင်းအလွန် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကဗျာအင်အားစု group၊ မေလ ၂၀၁၇။
Vol 1.No 148 . 20 May 2017 မှ...
Critics Ko Nine